Soo dejisan Privatefirewall 7.0.30.3 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Privatefirewall
Privatefirewall – xal aad u fiican oo leh nidaam difaac ah oo badan oo ka dhan ah hanjabaadaha shabakada. Barnaamijka waxaa ku jira fir fircoon, mulkiilaha codsiga, isticmaalka si loo kormeero nidaamka faylka iyo diiwaanka, modules si loola socdo dekadaha iyo taraafikada taraafikada. Privatefirewall waxay ka ilaalin kartaa kombuyuutarkaaga iyo shabakadada noocyada kala duwan ee hanjabaadaha shabakada sida dambiilayaasha, baabuur-wadista, keyloggers, rootkits. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameysid liisaska bogagga la isku halleyn karo oo aan la isku halleyn karin ama ka shakin, siinta goobo toos ah oo loogu talagalay goobaha ku yaal liiska madaw. Privatefirewall waxay soo saari kartaa farriimo elektaroonik ah, maareeyn kartid internetka xaddidan ee codsiyada, iyo in la eego lana xakameeyo liiska hababka loo baahan yahay internetka. Privatefirewall waxa kale oo ay isku darsamaysaa tiro ka mid ah internet-ka iyo shabakadaha ammaanka shabakada, heerka amniga taas oo loo habeyn karo si loo daboolo baahiyaha shakhsiyeed ee user.
Badbaadinta ka hortagga dembiilayaasha, xawaareynta-xayeysiinta, keyloggers, rootkits
Xakamaynta iyo ilaalinta hannaanka
Waxay abuurtaa liisaska caddaanka iyo madow ee goobaha
Maareynta codsiga sare
Dejinta heerka amniga shabakada
Soo dejisan Privatefirewall
Faallo ku saabsan Privatefirewall
Privatefirewall Xirfadaha la xiriira